Cid daneysa ma jirto inay Soomaaliya yeelato Dastuur – news
Cid daneysa ma jirto inay Soomaaliya yeelato Dastuur
Guddiga Dastuurka ayaa maanta Baalamaanka labadiisa Aqal usoo jeediyey in sida uga dhaqsiyaha badan ay u meel mariyaan Dastuurka, ama ay u daayaan Baarlamaanka cusub ee soo soda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dastuurka Soomaaliya, qoristiisa iyo qabyo-tirkiisa wuxuu noqday mashruuc dhaqaale lagu cuno, iyadoo aan jirin dan ka leh ku dhaqankiisa Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe intaba.
Guddiga ka shaqeeya arrimaha Dastuurka ayaa usoo jeediyay Maanta BF dalab ku aadan in kahor doorashooyinka meel-mariyo Dastuurka, oo wali doodiisu taagan tahay, maadaama dhameytiirkiisa hanaankii loo maray uu ahaa mid aan dah-furnayn oo qol mugdi lagu qoray.
Caqabadaha ugu waawayn ee haysta Soomaaliya waxaa kamid ah dastuurka, oo ah midkii kala saari lahaa arrimaha khilaafka ka taagan, sida qeybsiga Khayraadka iyo Federaalaynta, waxaana dastuur la'aanta keentay in Maamul walba uu kiisa ku dhaqmo.
Tan iyo 2010 ayay howshiisa soo socotay Dastuurka, waxaana isaga dambeeyay xukunka saddex dowladood, oo mid walba dhaqaale uga cuni jirtay dowladaha deeqaha dhaqaale siiya Soomaaliya, sida Midowga Yurub, Mareykanka iyo UN-ka.
0 Comments Topics: dastuurka unsom